Inona no atao hoe Platform Digital Asset Management (DAM)?
Alakamisy, Aprily 7, 2022 Alakamisy, Aprily 7, 2022 Nicolás Jiménez
Ny fitantanana ny fananana nomerika (DAM) dia ahitana ny asa fitantanana sy ny fanapahan-kevitra manodidina ny fampidirana, fanamarihana, katalaogy, fitahirizana, fakana ary fizarana ireo fananana nomerika. Ny sary nomerika, ny sary mihetsika, ny horonan-tsary ary ny mozika dia manome ohatra ireo sehatra kendrena amin'ny fitantanana ny fananan'ny haino aman-jery (sokajin'ny DAM). Inona no atao hoe Digital Asset Management? Ny DAM fitantanana fananana nomerika dia fomba fitantanana, fandaminana ary fizarana rakitra media. Ny rindrambaiko DAM dia ahafahan'ny marika mamorona tranomboky misy sary, horonan-tsary, sary, PDF, môdely ary hafa
Inona no atao hoe Infographic? Inona no tombony azo amin'ny tetika infografika?
Alarobia, Aprily 6, 2022 Alakamisy, Aprily 7, 2022 Douglas Karr
Rehefa mivezivezy amin'ny media sosialy na vohikala ianao dia matetika no tonga any amin'ny sary misy fampahalalana tsara tarehy izay manome topimaso momba ny lohahevitra iray na manapotika angon-drakitra an-taoniny ho lasa sary kanto sy tokana, izay tafiditra ao anatin'ilay lahatsoratra. Ny zava-misy dia… tia azy ireo ny mpanaraka, ny mpijery ary ny mpamaky. Ny famaritana ny infografika dia izao fotsiny… Inona no atao hoe Infografika? Ny infografika dia fanehoana an-tsary momba ny vaovao, angona, na fahalalana natao haseho
Zoma, Aprily 1, 2022 Zoma, Aprily 1, 2022 Douglas Karr
Rehefa maheno olona milaza ny teny hoe backlink ho ampahany amin'ny paikady ara-barotra nomerika amin'ny ankapobeny aho, dia miondrika aho. Hazavaiko amin'ny alalan'ity lahatsoratra ity ny antony fa te hanomboka amin'ny tantara sasany. Tamin'ny fotoana iray, ny motera fikarohana taloha dia lahatahiry lehibe izay natao voalohany indrindra ary nalamina toy ny lahatahiry. Nanova ny tontolon'ny fikarohana ny Algorithm Pagerank an'ny Google satria nampiasa rohy mankany amin'ny pejy alehana ho zava-dehibe. ny
Alarobia, Martsa 30, 2022 Alarobia, Martsa 30, 2022 Douglas Karr
Amin'ny maha-orinasa anao dia nandany fotoana, ezaka ary vola be ianao tamin'ny famolavolana tranokala na tranokala e-varotra. Saika ny mpandraharaha sy ny mpivarotra rehetra dia miasa mafy mba hahazoana mpitsidika vaovao amin'ny tranokalany… mamokatra pejy vokatra tsara tarehy, pejy fipetrahana, votoaty, sns. Tonga ny mpitsidika anao satria nihevitra izy ireo fa manana ny valiny ianao, ny vokatra, na ny serivisy tadiavinao. ho. Imbetsaka anefa io mpitsidika io no tonga ary mamaky azy rehetra
Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay amin'izao fotoana izao izay manana orinasa vaovao, marika vaovao, sehatra vaovao, ary tranokala e-varotra vaovao amin'ny indostria tena mifaninana. Raha azonao ny fomba fiasan'ny mpanjifa sy ny milina fikarohana, dia azonao fa tsy tendrombohitra mora ny hiakarana. Ny marika sy ny sehatra manana tantara lava momba ny fahefana amin'ny teny fototra sasany dia manana fotoana mora kokoa amin'ny fitazonana ary na dia mampitombo ny laharan'ny organika aza. Fahatakarana SEO amin'ny 2022 One